Oromoon biyya kessa Ooggana (Leadership) mataa isaa uumachuun qabsoo itti fufu qaba.
Oromoon biyya Keessa jiru rakko isaa irra ga’aa jiru kana dura dhabachuuf Oogganaa mataa isaa Ledarship cimaa of keessa ummachuu qaba. Koree Hiriira kana Ooggannuu Aannalee fi Magalaa Hunda keessatti ijaruu qaba. Koreen kun Miseensoota 5 hanga 9 of keessa qabatu koree waliigala fi koree kana jalatti kan gurma’aan damee adda adda of jalatii gurmeessa.
Koree Yeroo Bulchiinsa fi Nageenyaa jeedhama:-
Hojiin koree kana;
1. Hiriira nagaa Oromoon geggessa jiru to’achuuf geggesuu;
2. Gaafii Uummataa dura bu’umaan waraa dhimmi ilaaluti dhiyeesuuf;
3. Hiriira kana Injjifannoo Oromoon argatee to’achuun geggesuuf;
4. Rakkko ga’ee hunda galmeesuun yakkamtoota Oromoo irratti bala gesisan saxiluu;
5. Uummani tokkumman hangaa gaafin isaa deebi’uti mormii isaa itti fufisisuu;
6. Midhamatoon Hiriira kana garggarsa barbaachisuu hunda akka argatan goochuu;
7. Qaamaa Nageenya uummataa egisisu Poolis fi waraana ,akka Uumataa birra gooran gorfachuu
8. Gaafiin Uummataa Gaafii haqaa ta’uu isaa bareefaman ragga waliin ibsachuu yaaluu;
9. Waan goodhama jiru Suura , Vedio fi Bareefama guyya guyyaan media Adunyafi Gabasuu;
10. Koree hiriira kana garggaruu danda’aan of jalatti akka barbaachisuma isaan gurmeesuu;
Koreewaan Koree waliigala “ Koree Yeroo Bulchiinsa fi Nageenya Oromoo -KYBNO” jalatti gurma’uu qaba.
1. Koree Nageenya Oromoo egisisuu,
2. Koree fayaa fi wala’ansa yeroo latuu;
3. Kore garggarsa Mallaaqa sasabun, Nyata fi dhugatii qabsa’ootaf dhiyeesuu;
4. Bulchiinsa fi siyyaasaa sochii Oromoo geggesuu
5. Koree media fi qunamtii biyya keessa fi biyya alaaf guyya guyyaan qindeesuu
6. Ga’een Waldaa Kiristana fi Musilimaa Oromoo olana ta’uu qaba, baratoota Oromoo garggarsa hunda goochun harka isaan dirirsuu qabu Walumagalatii Sochii fi qabsoo uummataa Oromoo Godiinalee Aannalee , magaaloota fi University Oromiyyaa hunda keessatti Ooggana itti goochuu abban qabsoosi oogganii qabsoosi Uummata keessa ta’uu isaa mirkaneesu.
Oromoo biyya keessa jiru Oggana ofuma isaa keessa filachuu qaba!!
1. Waraana fi Poolisi Oromoo of dukaa hirirsuu qaba;
2. Ogannoon OPDO uumataa isaan birra goorun qabuu,
3. Jarsooni biyya Ijoole baratoota dura hiriruu qabuu;
4. Dhadannoon keenya Gaafi mirgi ta’uu isaa ibsachuu;
5. Hojeetooni, Dalgaltoon, Qootee bulan Oromoo ijoole Oromoo birra dhabachuu qaba:
6. Gaafiin Uumataa hanga deebii argatutu Hirhirii fi Mormiin uumataa itti fufuu qaba.
Dhadannoon keenya kan kana gadii fi kana kana fakatan ta’uu qaba:-
1. Finfinnee murree hin keninu !!!
2. Finfiinnnen Oromiyaa Jalati buluu qabdii !!!
3. Godiina Adda Oromoo Maaster Plani mata ishee Oromiya jalati qoophefachuu qabdi!!!
4. Afaan oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u.
5. Keeyyati 49 lakobs 5 hojiiti nuf haa hiikamu Oromiyaa waan Finfinnee irra argachuu maltu hargatuu!
6. Ilmaan Oromoo mana adabaa jiran nuf haa hikaman
7. Fixiina Ummataa Oromoo Ambo irrati warii rawwatan qabamu qabu !!!!
8. Waraan Ittisa biyya fi Polisiin Federala Oromiyya keesa galuuf mirga hin qaban Oromiyyan Polisii Oromiyyan egamuu qabdi !!!
9. Waraan Oromoo fi OPDO uumataa Oromoo birra dhabadha !!!
10. Dhaabilee Oromoo qabsoo mirga Oromoo gaafatee tumsa !!!
11. Baratoon hidhaman hundi atataman gadii hadhifman !!!
12. Siyyasaan Oromoo yaakkun hadhabatu!!!
13. Baratoon Hidhama Haala duree tokko malee haikama,
14. Lubu baratoota keenya warii balessan atataman seerati hadhayatan !!
15. Oromoon lafa isaa irrati mureefachuu qaba male federla hin murteesuuf Godiin Adda Oromiyya Oromiyya jalati gudachuuf mirga qabdi !!
Dargagagoon Oromoo fi uumanii Oromoo kalatiin qabsoo birra jiru waan hojeetu ni beeka garuu degertoota keenyaf yaada tokko tokko dhiyeesuu yoo barbachiseef jeenti malee waan uni jeenu qoofa haraawwatuu jeechun oduu barii isaa itti darbee ta'ee jira.
Gaafi fi Dhadannoo Hiriira Nagga Baratoota Oromoo Yuunbarsitii adda adda irra dhiyacha jiru.